‘विदेशको उच्च शिक्षाबारे सम्पूर्ण जानकारी इक्यान मेलामा’ – Arthik Awaj
‘विदेशको उच्च शिक्षाबारे सम्पूर्ण जानकारी इक्यान मेलामा’
दीपकराज भुसाल, महासचिव, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)
By आर्थिक आवाज	 २०७७ माघ २ गते शुक्रबार १६:२७ मा प्रकाशित
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को आयोजनामा १४औं संस्करणको इक्यान शैक्षिक मेला सुरु भएको छ । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी इक्यानले यस पटक भर्चुअल माध्यमबाट मेला सञ्चालन गरेको छ । मेलाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर इक्यानका महासचिव दीपकराज भुसालसँग आर्थिक आवाजले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
भर्चुअल रुपमा इक्यान फेयर आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले वर्षेनी इक्यान शैक्षिक मेला आयोजना गर्दै आइरहेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म हामीले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा मेला गर्दै आइरहेका थियौं । यस पटक कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी अनलाइनमार्फत मेला आयोजना गरेका छौं । प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर भिडभाड गरी मेला गर्नु भन्दा अहिलेको समयमा प्रविधिको प्रयोग गरी मेला गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचका साथ हामीले मेला आयोजना गरेका हौं । जुन मेला माघ २ गते शुक्रबार सुरु भइसकेको छ र माघ ५ गतेसम्म चल्नेछ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि मेला प्रभावकारी बन्नेछ ।
भर्चुअल रुपमा इक्यान फेयर भइरहँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेका छौं । कुनै एउटा ठाउँमा प्रत्यक्ष मेला सञ्चालन गर्दा काठमाडौं तथा आसपासका क्षेत्रलाई मात्रै लक्षित हुन्थ्यो । अहिले अनलाइनका माध्यमबाट मेला आयोजना गर्दा देशभरलाई समेट्न सकेका छौं । इक्यानका शाखाबाट पनि मेलामा राम्रो सहभागिता छ । इन्टरनेटको पहुँच भएका सबै ठाउँबाट मेलामा सहभागी हुन सकिने भएकाले पनि अनलाइन प्रविधिबाट आयोजित मेला सबैको पहुँचमा र प्रभावकारी भएको प्रतिक्रिया पाएका छौं । यसपटकको मेलामा भएका सबल र कमजोर दुवै पक्षको समीक्षा गरी आगामी वर्ष गर्ने मेलाका सन्दर्भमा हामीले रणनीति पनि बनाउनेछौं ।
फेयरमा कतिजना विद्यार्थी सहभागी हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
देशभरबाट विद्यार्थीहरु फेयरमा अनलाइनका माध्यमबाट जोडिने भएकाले उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । दैनिक २० हजार विद्यार्थी मेलामा सहभागी भएर परामर्श लिनुहुनेछ भन्ने विश्वासमा हामी छौं । बिट्रिस काउन्सिल प्रिजेन्टर रहेको यो मेलामा विदेशस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कलेज र नेपालमा रहेका परामर्श दातृ संस्थाहरुको उल्लेख्य सहभागिता छ ।
इक्यान शैक्षिक मेलामा किन सहभागी हुने ?
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि परामर्श सेवा लिने सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म नै इक्यान शैक्षिक मेला हो । विद्याथीले आफू अध्ययनका लागि जान चाहेको देश, मन परेको कन्सल्टेन्सी वा सम्बन्धित कोर्सका बारेमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी मेलाबाट लिनसक्नेछन् । छात्रवृत्ती, भाषा शिक्षाका कक्षालगायत करिअर काउन्सिलिङबारे जानकारी तथा परामर्श लिन पनि मेला प्रभावकारी माध्यम बन्नेछ । कोरोनाका कारण परिवर्तन भएको शिक्षा नीति तथा डकुमेन्टेसनका बारेमा जानकारी लिन पनि यो मेला उपयुक्त माध्यम हो ।
इक्यान शैक्षिक मेला माघ ५ गतेसम्म जारी रहन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई मेलामा सहभागी भएर परामर्श सेवा लिन म आग्रह गर्दछु । हरेक दिन बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट मेला सञ्चालन हुनेछ ।
‘फेकनलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनेछौं’
फेकन निर्वाचनः यस्तो छ बासु नेपाल प्यानल, केके छन् प्रतिबद्धता ?
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघको साधारणसभा शनिबार, दुई प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा
‘व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा’
लुम्बिनी अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको पदस्थापन, सल्लाहकार मनोनित
युआरएलको बेशिसहर शाखामा निःशुल्क जाँच, बालिङमा छिट्टै शाखा
‘बिबिसी सो’का चर्चित मास्टर सेफ साह भन्छन्, ‘नेपाली खाना विश्वभर पस्किँदैछु’